Bayar Pay Per Klik Click PPC Joogitaanka publisher a in domain ka dalwaddii in tiro aan la koobi karayn of sites bixisaa faa'iidooyinka in Bixi Per Click (PPC), kaas oo noqday caan bartamihii 1996. Planet Oasis waa mid ka mid ah Horseedka ah kuwaas oo soo bandhigay goobaha goobaha ay Bixi Per Click (PPC). Talaabadani waxa ay noqotay Google waxa uu raacay AdWords. In Indonesia, waxaa jira goobo badan Bixi Per Click (PPC), oo ay ku jiraan AdsenseCamp, PPCBlogger iyo BloggerBersatu iyo kuwa kale. Marka la barbar dhigo saddexda goobood oo markaas AdsenseCamp bixin doonaa guddi ka badan PPCBlogger iyo BloggerBersatu saddexaad, laakiin sidoo kale waxay bixiyaan faa'iidooyinka isku mid ah ad yeerto ay soo bandhigaan nidaamka sax ah ku dhisan. AdsenseCamp waa websaydh Adsense Indonesia kaas oo ka mid ah shirkadaha shirkadaha shirkadda CV JogjaCamp oo ku yaala Yogyakarta. AdsenseCamp focus on adeeg by gelinayn saddex taageero macaamiisha u adeega online (IM, email, sms iyo phone) ama offline by toos socda xafiiska. AdsenseCamp waa website ku siinaya fursad aad ku kasbato dakhliga dheeraadka ah adigoo ku siinaya boggaaga internetka meel ka mid ah xayeesiinta xayeysiinta. AdsenseCamp sidoo kale waxay bixiyaan fursado ay xayeysiiyaha doonaya in ay kor xayeysiis in loo qaybin doonaa in milkiilayaasha websites in ay leeyihiin shabakad in AdsenseCamp. PPCBlogger waa adeegyada bixiyaha adeegga network xayaysiiyo caalami ah, waxyaabaha PPCBlogger ayaa waxaa advertising Pay Per Click (PPC) taas oo ku xidhan karto xayeysiiyaha (advertiser) la daabacayaasha publisher / advertising (daabacayaasha) by isticmaalka internet-ka iyada oo loo adeegsanayo horumarinta iyo horumarinta ganacsiga ee xubin kasta oo ka mid ah sidoo kale waa macneheedu tahay in dakhli laga helo boggaaga ama blogka aad leedahay. BloggerBersatu waa macquul inaad ka hesho akoon bilaash ah oo laga helo boggaaga / blogkaaga. Bayar Pay Per Klik Click PPC